स्वस्थानीलाई आदर्शीकरण गर्दा बलात्कारलाई कसरी बेठीक भन्ने ? - Nepal Readers
Home » स्वस्थानीलाई आदर्शीकरण गर्दा बलात्कारलाई कसरी बेठीक भन्ने ?
स्वस्थानीलाई आदर्शीकरण गर्दा बलात्कारलाई कसरी बेठीक भन्ने ?
स्वस्थानी कथालाई लिएर एउटी ‘विद्वान’ महिलाले एक अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘७ वर्षकी गोमा र ७० वर्षका शिव शर्माबीच बिबाह भएको कुरालाई लिएर स्वस्थानी कथालाई समग्रमै गलत भन्न हुन्न । त्यो बेलामै त्यस्तै हुन्थ्यो । मेरै हजुरबाले समेत त्यसरी कलिली बालिकासँग बिहे गर्नुभएको हो ।’
उनको दलील यस्तो छ, ‘आज यति सानासाना बालिकाको बलात्कार र हत्या हुन्छ । उसो भए १०० वर्षपछिको समाजले आजको समाज पनि गलत थियो भन्दैन र ?’
हो, अवश्य भन्छ ।
त्यसैले त महिलामाथि हुने हिंसामा कडा प्रतिरोध गरौैं नत्र भोलिको पुस्ताले हामीलाई के भन्ला भन्नुपरेको हो । ‘त्यो बेलामा त्यस्तै हुन्थ्यो’ भन्ने कुरामै पनि भोलिको पुस्ताले त्यो बेलामा अर्थात् आज न्यायकै फिरादमा महिनौंसम्म सडक संघर्ष भएको, लेखेर–बोलेर प्रतिकार र खबरदारी गरेको रेकर्ड पनि त पक्कै हेर्ला !
त्यतिखेर कसले के गर्दै थियो? स्वस्थानीजस्ता कथाको आदर्शीकरण गर्दै थियो कि कथित संस्कृतिद्वेषी परम्परा भत्काउने, अराजक भनिइने र सनातनवादीका गाली खाइने जोखिम खपेर पनि प्रतिवादमा उत्रेको थियो भनेर पनि त अध्ययन र अनुसन्धान गर्ला !
यी ‘विद्वान’ तिनै हुन् जसले महिलाको व्यक्तित्व र औपचारिकताका लागि सारीचोलो नै लाउनुपर्छ भनेको विषय केहि पहिले विवादित भएको थियो । इतिहासको भौतिकवादी र वैज्ञानिक बुझाइबिनाका यस्ता ‘विद्वान’हरू व्यक्तिगत उन्नति र निश्चित घेराको प्रगतिलाई नै मुख्य साध्य ठान्छन् । महिलामाथी हुने सबै प्रकारका दमन र हिंसामा मुख्यत : अर्थ राजनीति र त्यसैले निर्धारण गरेको संस्कृति, कथा, गाथा र प्रचलन जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरासम्म यिनीहरू कहिल्यै पनि पुग्दैनन् ।
हिंसाको चुरो अर्थराजनीतिमा छ । त्यसको उपोत्पादका रूपमा रहेको संस्कृतिमा छ । स्वस्थानीलगायतका असंख्य पुस्तक र महिलाको अस्तित्वविरोधी सबैखालका कथाहरु यस्तै हिंसाका प्रवर्द्धक हुन् । आज भइरहेका बलात्कार र हत्याका अप्रत्यक्ष उत्प्रेरक पनि यस्तै कथा हुन् ।
तपाईंलाई कुनै कथामाथि या कुनै संस्कारमाथि विशेष अनुराग हुन सक्छ । अनुराग राख्न पाइन्छ तर हिंशा प्रवर्द्धन गर्ने पुस्तक र प्रचलनको सार्वजनिक महिमागान गर्नु अघि हजारौंपल्ट सोच्नुस्, कतै तपाईं पनि भविष्यमा हुनसक्ने अर्काे कुनै जघन्य अपराधको परोक्ष प्रेरक त बन्दै हुनुहुन्न ?
महिलामाथिका तमाम हिंशाका मुद्दालाई गफ गर्ने, ’जागीर खाने’ र घुमघाम गर्ने कस्मेटिक विषय मात्रै नबनाऊँ विद्वानजीहरु ! इतिहासले सराप्ला !
(तिवारीको फेसबुकबाट। तस्वीरः काठमाण्डुपोस्ट)